Izinyathelo ezi-5 Zokuxhumana nabantu Zomsebenzi Wokuthengisa Martech Zone
Izinyathelo ezi-5 Zokuxhumana nabantu Ochwepheshe Bokuthengisa
NgoLwesine, Novemba 12, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngihlangane nekhasimende namuhla eliqonda izisekelo ze-Twitter, Facebook, LinkedIn, njll. Futhi bengifuna ukubanikeza impendulo isiqala ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngempumelelo. Iklayenti lalinguchwepheshe othengisayo futhi lalifuna ukuqala ukusebenzisa lelo thuba kodwa lalingenaso isiqiniseko sokuthi lizolinganisela kanjani izidingo zalo zomsebenzi ngenkathi lihlela isu lokuxhumana nabantu.
Leyo yinkinga ejwayelekile. Ukuxhumana nabantu ku-inthanethi akufani nokuxhumana nabantu ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Uhlangana nabantu, ukhombe izixhumi, futhi uthole futhi wakhe ubudlelwano nabathonya namathemba. Ngeke umane ungene kumcimbi wokuqala wabenzi bemvula bese wenza lokhu (Abenzi bemvula bayi- iqembu lokuxhumana lesifunda lokho kukhula okuqhumayo). Kuthatha isikhathi, kudinga ukumba okuthile, futhi ekugcineni umfutho ukuqala ukuzuza kunethiwekhi yakho. Lokhu kuyiqiniso online njengoba kungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Izinyathelo ezi-5 zokuSebenzisa ngempumelelo i-Social Networking kuDrayivu Sales
Ngena ku-inthanethi: Yakha eyakho LinkedIn profile, vula ifayela le- Twitter akhawunti, futhi uma ufuna ukusheshisa inqubo (futhi utshale isikhathi esiningi), qala ukubhala ibhulogi embonini yakho. Uma ungenayo ibhulogi, thola amanye amabhulogi ongafaka isandla kuwo.
Khomba izixhumi: Enye indlela esheshayo yokuthola izixhumi eqenjini lakho ukujoyina inethiwekhi eku-inthanethi efana ne-LinkedIn. Ku-Twitter, ungakwenza lokhu nge kucwaningwa ama-hashtag nokuthola abantu abalandela lawo ma-tweets embonini. Amathuluzi athuthukile njenge Isi-Radian6 ingasiza futhi lapha!
KumaBlog, izinguquko zakamuva kwiTechnorati zingakusiza ekunciphiseni izinhloso zakho. Ukwenza ibhulogi yokusesha igama elifana neCRM kungakunikeza uhlu lwamabhulogi, ngokulandelana! Faka lokhu okuphakelayo kumfundi wakho owuthandayo wokuphakelayo!
Yakha Ubudlelwano: Lapho usukhombe izixhumi, qala ukwengeza inani kokuqukethwe kwabo ngokungeza iminikelo efanelekile ngokusebenzisa imibono namathegi. Ungazikhuthazi ... laba akubona abantu ukuthenga imikhiqizo yakho, yibo abazokwenza inkulumo mayelana nemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Heha okulandelayo: Ngokunikela engxoxweni nasegunyeni lokwakha embonini yakho - izixhumi zizokhuluma ngawe futhi abagqugquzeli bazoqala ukukulandela. Ukhiye lapha ukunikeza, ukupha, ukupha… awukwazi ukunikela ngokwanele. Uma ukhathazekile ngabantu abamane bantshontshe imininingwane yakho bese beyisebenzisa ngaphandle kokukukhokhela… musa! Labo bantu bebengeke bakukhokhele, noma kunjalo. Labo belungafica pay yibo abasazokwenza.
Nikeza indlela yokuzibandakanya: Yilapho ibhulogi ifika kahle! Manje njengoba unakwe ngabantu, udinga ukubabuyisa endaweni ethile abazokwenza ibhizinisi nawe. Ngebhulogi, kungaba ukubizelwa esenzweni kubha yakho eseceleni noma kwifomu lokuxhumana. Nikeza ngamakhasi wokubhalisa wokulanda noma ama-webinars. Uma kungekho okunye, nikela ngephrofayili yakho ye-LinkedIn ukuxhumana nayo. Noma ngabe unquma ini, vele uqiniseke ukuthi kulula kakhulu ukukuthola… kuba lula ukuxhumana nawe, abantu bayokwanda.
Ukuxhumana nabantu ngenhloso yokukhiqiza ukuthengisa akunzima kepha kungathatha isikhathi eside. Njengokubeka phansi izinhloso zokuthengisa ngenombolo yezingcingo ozenzayo, inani lemihlangano oya kuyo nenombolo yokuvala oyenzayo… qala ukubeka phansi izinhloso ezithile kwinani lezimboni ozitholayo, inombolo ulandela, uxhuma ne-, futhi unikela ku-. Lapho usuwuqalisile umdlalo wakho, zinikele kokuthunyelwe kwezivakashi noma ube nalezo zixhumi noma izikhuthazi zokuthunyelwe kwezivakashi kubhulogi yakho. Izethameli zokuhweba ziyindlela enhle yokwandisa inethiwekhi yakho.
Njengoba uqhubeka nokusebenza inethiwekhi yakho nokwakha ubudlelwano nezixhumi nabashukumisi, uzothola inhlonipho yabo futhi uvule amathuba ongazi ukuthi akhona. Ngithintana nsuku zonke manje, ngikhuluma njalo, ngibhala incwadi futhi nginebhizinisi elikhulayo - konke okwakhiwe kusuka kucebo elisebenzayo lokuxhumana nabantu. Kuthathe iminyaka ukufika lapha - kepha bekufanele! Bambelela!
Tags: ukuxhumana kwenethiwekhiochwepheshe bezentengisoyokuthengisa ezokuxhuminethiwekhi yezokuxhumanaukuthengisa komphakathi
Gcina Izethembiso Zakho
Nov 12, 2009 ngo-3: 03 PM
Ukuba semuva kwesikhathi kokutholwa kwemithombo yezokuxhumana lolu lwazi lungangivumela ukuthi ngisebenze kahle ngesikhathi engihlela ukusisebenzisa ekuziqhubekeleni phambili njengochwepheshe - ohlobene nemithombo yezokuxhumana. Siyabonga ngokuqonda uDoug.
Nov 12, 2009 ngo-3: 33 PM
Wenza umsebenzi omuhle wokugqamisa ukuthi ukwakha ubuhlobo kuseyikhono lokusebenza lokuthengisa eliyinhloko. Noma kunjalo, ezinye izindlela zishintshile noma zithuthukisiwe.
Ngicabanga ukuthi abantu balahlekelwa lithuba langempela lapho behlisa imithombo yezokuxhumana njengendlela yokuhlonza ithuba nokusheshisa ubuhlobo bokwenza isivumelwano.
Jan 5, 2017 ngo-3: 16 PM
Ukukhulisa inethiwekhi yozakwethu yokudlulisa enamandla kungaba nomthelela omkhulu ebhizinisini lakho kunanoma yini enye oyenzayo kulo nyaka. Sebenzisa amathuluzi wamahhala afana neReferrals-In.com ukuze usebenzise i-LinkedIn ngokukhulisa inethiwekhi yozakwethu wokudlulisa.